Xasan Sheekh Maxamuud oo ka digay in dalka lagu maamulo Awood – Kalfadhi
MUQDISHO, 23 JAN 2019 (KALFADHI)-Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sidoo kale katirsan Xubnaha Baarlamaanka Soomaaliya oo ka qeyb galayay Kulan siyaasadeed ay qabteen Xisbiga uu Guddoomiyaha ka yahay ee UPD, kaas oo looga hadlayay Sooyaalka Soomaaliya 100-kii sano ee la soo dhaafay ayuu si kulul uga hadlay Xaaladda Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dalkaan aan lagu maamuli karin xoog iyo awood midna, balse lagu maamuli karo oo kaliya qaanuun iyo shuruucda dalka u yaala. Waxa uu sheegay in dalkaan 30 sano ka hor awood ciidan lagu maamuli jiray balse laga dhaxlay dhibka hada lagu jiro loona baahan yahay in lagu waano qaato.
“Dadka qaarkiis ayaa maanta waxay leeyihiin dowlad xoog badan oo gacan adag ku qabato dalka ayaa loo baahan yahay, waxa aan maanta joogno ayaa ka dhaxalnay dowlad dalka gacan adag ku qabato”, ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa ku taliyay in hogaanka Soomaaliya iyo siyaasiinta ay xooga saaraan sidii dalkaan loogu qaban lahaa qaanuun iyo shuruuc halkii ay ku fekeri lahaayeen in dalka lagu qabto awood iyo xoog. Waxa uu sheegay in dhib badan laga dhali karo hadii la raadiyo dowlad gacan adag dalka ku qabata.
“qaanuun iyo shuruuc ayaan u baahanahay ee shaqsiyaad gacan adag ku qabto uma baahni”ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynihii hore ee Soomaaliya.
Hadalka Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa u muuqda mid uu kaga hadlayo Xaaladda Soomaaliya. Xisbiga uu Guddoomiyaha ka yahay ee UPD ayaa katirsan Xisbiyo siyaasadeed oo laga hor istaagay kulamo ay ku qabsan lahaayeen magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo.